Iindaba ze-Android Wear 2.0 | Iindaba zeGajethi
Ezi zezona zinto zintsha zintsha esiza kuzifumana kwi-Android Wear 2.0
IiVillamandos | | Android, Izixhobo ezinokunxitywa
Izolo nje uGoogle ubhengeze ngokusesikweni ukufika kwintengiso ye I-Android Wear 2.0, Inguqulelo yesibini yenkqubo yokusebenza kwayo, ngakumbi umphuhlisi wezixhobo ezinxitywayo, phakathi kwazo, ngaphandle kwamathandabuzo, iiwotswat ezimileyo zigqamile. Kule nqaku sele sikubonisa uluhlu olupheleleyo lweewotshi ezifanelekileyo eziza kufumana uhlaziyo lwesoftware olubhengezwe izolo ngugqirha omkhulu.
Ngokuka-David Singleton, usekela-mongameli we-Android Wear, ayisiyiyo le nto, kodwa yeyona inkulu esele yenziwe ukuza kuthi ga ngoku. Kuko konke oku sigqibe kwelokuba sikuxelele kweli nqaku eyona nto iphambili iindaba esiza kuzifumana kwi-Android Wear 2.0.
1 Umncedisi weGoogle
2 Ukwenza ubuqu kunye nokwenza lula
3 Amathuba amatsha ekusetyenzisweni kwezicelo
Ukulinda bekude kodwa ekugqibeleni Umncedisi kaGoogle okrelekrele ufikelele esihlahleni. Ngokuchukumisa nje elinye lamaqhosha ekubukweni okanye ukusebenzisa umyalelo welizwi "Kulungile Google" uMncedisi uya kuba ukulungele ukusinika ulwazi esilucelayo.
Ukwazi imozulu namhlanje okanye ukuba izakuba yintoni ngomso, ukuphonononga uluhlu lwemisebenzi okanye ukubhukisha kwindawo yokutyela zezinye zeendlela esinokuzinikwa ngumncedisi okrelekrele wesikhangeli.
Ayisiyonto intsha esingayaziyo kodwa nge-Android Wear 2.0 Umncedisi weGoogle Ifikelele esihlahleni sethu, ukusikhupha kwiingxaki ezininzi kwaye ngaphezulu kwako konke ukwenza ubomi bube lula kancinci. Okwangoku gcina engqondweni ukuba ifumaneka kuphela ngesiNgesi nangesiJamani, nangona uGoogle sele eqinisekisile ukuba ngohlaziyo oluzayo luya kuqala ukubakho ngeelwimi ezininzi. Ndiyathemba ukuba iSpanish iphakathi kwabo kwaye izakukhawuleza kungekudala.
Ukwenza ubuqu kunye nokwenza lula
Enye yezinto phantse sonke esingabasebenzisi bewatchwatch ene-Android Wear ephosiweyo kakhulu lulwazi oluncinci esinokuthi ngamanye amaxesha silubone ngqo kwiscreen. UGoogle uphinde wacinga ngolwazi oluncinci esinokulibona kwaye nge-Android Wear 2.0 oku kuyakutshintsha kakhulu.
Kwaye ukusukela ngoku ukuya phambili sinokwenza ngokwezifiso ubuso bewotshi ukuze ibonise ulwazi oluthe kratya esikukhethayo. Ukongeza, kuya kubakho ukumisela iipaneli ezahlukeneyo, kunye nenani elikhulu lolwazi, onokuhamba ngalo ngokushenxisa umnwe wakho ngasekhohlo okanye ngasekunene. Umzekelo, unokwenza iiphaneli zolwazi kuxhomekeke kwindawo okhoyo kwaye akukho mfuneko yokuba ube nedatha efanayo xa useofisini ngokungathi usejimini.
Okokugqibela kufuneka sikuxelele kweli candelo ukuba Amanyathelo phakathi kwezicelo kunye nemisebenzi yenziwe lula ukuze ibe lula kwaye ikhawuleze kunaphambi kokufikelela kwiiphaneli ezithile.
Amathuba amatsha ekusetyenzisweni kwezicelo
Ngokufika kwe-Android Wear 2.0 ayisiyiyo kuphela inkqubo yokusebenza ephuculweyo, kodwa izicelo ezininzi zikhuphe ukuphuculwa kunye nokusebenza okutsha, ethi yona ichaphazele sonke esingabasebenzisi.
Ngokomzekelo Google Fit, efakwe ngokwendalo kuninzi lweewatchwatches, ngoku ikuvumela ukuba ulinganise umgama, iikhalori ezitshisiweyo okanye ukubetha kwentliziyo, nokuba uyahamba, uyabaleka okanye uhamba ngebhayisikile, into enokuba luncedo kubantu abaninzi.
I-Facebook Messenger, iGlide, uGoogle Messenger, iiHangouts, iTelegram kunye neWhatsApp zikwaphucule kwaye kukuba ngokuchukumisa nje umyalezo ungaphendula, uxelele umyalezo wakho okanye unyanzelise impendulo yakho.
Kananjalo ngoku sinokukhuphela usetyenziso ngokuthe ngqo kuGoogle Play edityaniswe kwisixhobo uqobo, kwaye ususe kwimenyu zonke ezo singazisebenzisi.
Ngokufika okusemthethweni kwe-Android Wear 2.0, izaziso zitshintshe kakhulu. Endaweni yamakhadi amhlophe avele ezantsi kwesikrini, ekungekho mntu uthandileyo, ngoku siza kubona izaziso ngendlela elula nangaphezulu kwayo yonke indlela eluncedo.
Kuxhomekeke kwisicelo esisifumana kuso isaziso, siya kusibona ngombala omnye okanye komnye. Ukongeza, ziya kuvela kuphela xa usizisa esihlahleni emehlweni akho kwaye ukuba ufuna ukubona zonke izaziso kunye akukho ngxaki kuba iya kuba yanele kuwe ukuba usilayishe isikrini esikhulu ukuze uzibone.
Okokugqibela kwaye sivale olu luhlu lwamanqaku aphambili esinokuwabona kwaye sonwabele kwi-Android Wear 2.0, asinakulibala malunga Ukufika kwe-Android Bhatala koonodoli bethu. Inkqubo yokuhlawula kaGoogle ekugqibeleni ifike kwii-smartwatches zethu kwaye ngoku kuya kuba nakho ukuhlawula ngokusebenzisa iwotshi yethu smart, okoko nje isixhobo sethu esiphathwayo sineNFC.
Okwangoku le nkqubo yokuhlawula iqala ukufumana abalandeli kwaye kulindeleke ukuba ngoku ifike kwi-Android Wear, inani labasebenzisi abahlawula besebenzisa izixhobo zabo zokunxiba baya kuqhubeka bekhula ngesantya esihle. Ewe siyathemba ukuba ilula, ikhululekile kwaye iyakhawuleza ukuyisebenzisa, kuba ezi zinto zintathu ziya kuba sisitshixo kwikamva lakho.
Emva koko sikubonisa, ukucima nakuphi na ukuthandabuza, indlela uluhlu olupheleleyo lwee-smartwatches ukuba baya kufumana uhlaziyo lwe-Android Wear 2.0 ngemihla esiza kuchazwa ngabavelisi abohlukeneyo;
I-Casio Smart yangaphandle yokubukela
Umseki we-Fossil Q
Ifosile Q Marshal
Ifosili Q Ukubhadula
Ukubukela kwe-LG R
I-LG Bukela i-Urbane yesi-2 yoHlelo lwe-LTE
UMichael kors ufikelelo
Umlilo 360 2nd Gen
Moto 360 yaBasetyhini
IMoto 360 yeMidlalo
Ibhalansi eNtsha RunIQ
I-TAG Heuer Idityanisiwe
Masikhumbule ukuba isimbo sokubukela se-LG esandula ukuboniswa kunye neLG Watch Sport sele ine-Android Wear 2.0 efakwe ngokwendalo, kwaye ngoku kufuneka silinde ukufika kwenguqulelo entsha yenkqubo yokusebenza kaGoogle kwizixhobo zethu ukuze sikwazi ukuvavanya Izinto ezinqabileyo kunye nokusebenza okutsha, kwaye uqalise ukwenza izigqibo kuzo.
Ucinga ntoni ngamanqaku amatsha aziswe nguGoogle kwi-Android Wear 2.0?. Sixelele uluvo lwakho kwisithuba esibekelwe amagqabantshintshi kule posi okanye ngayo nayiphi na inethiwekhi yoluntu apho sikhona. Sixelele kwakhona ukuba yeyiphi imisebenzi emitsha okanye amanqaku onokuthanda isigebenga ukuba usinike ngenguqulelo entsha ye-Android Wear.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » Izixhobo ezinokunxitywa » Ezi zezona zinto zintsha zintsha esiza kuzifumana kwi-Android Wear 2.0
Ukusebenza ngaphakathi kwinguqulelo entsha kunokuba lubisi, kodwa ngokubhekisele kwizaziso… ikaka ..
Nokuba ujonga iwotshi, ukuba awuyichukumisi "phezulu", akunakwenzeka ukuba wazi ukuba unaso na isaziso. Into yakhe kukuba wahlala apho, ukuze sikwazi ukumbona ngokulula.
Kwaye ukuba iwhatsapp ... libala ngaleyo "kwipliqui" singayiphendula. Yayingcinga kabani ukubeka ezona zisanda kufunyanwa phezulu encokweni?
Yiyeke, ngokwengqiqo yayo. Kwaye ukuba ufuna ukufunda kwangoko ngentla, awunasidingo sokuchitha imali ngobuqhetseba kuyo yonke into eguqulweyo.
Kwaye ukuyiphendula ... akukho lula kwaphela. Ngaphambi kokuba "ubumelwane" isikrini kunye nempendulo. Ngoku kuya kufuneka ujonge ngaphakathi kuguqulelo lwe icon ukucofa ukuze ukwazi ukuphendula.
Ngaphandle koko, ngaphambi kokuba uxele kwaye emva komzuzwana ... umyalezo wawuthunyelwe ngokwakho. Ngoku kuya kufuneka ukhulule isandla sakho kwaye ulinde i icon encinci ukuba ivele ichukumise kwaye ithumele umyalezo.
Phambi ... Nokuba uqhuba, ungaphendula u-WhatsApp ngaphandle kwengozi. Ngoku kunokuba bubuyatha bokwenene ukuzama.
Masibone ukuba bayayihlaziya na inguqulelo kuba emva kohlaziyo, ndiyikhumbula inguqulelo yam yakudala
Isikrini sokuvuza okutsha kwe-LG G6 kwinethiwekhi
Ezi zezona zinto zintle ngeveki esinokuzifumana kwiAmazon